I-House Cuian - indlu yamatshe yendabuko - I-Airbnb
I-House Cuian - indlu yamatshe yendabuko
Monteprat, Friuli-Venezia Giulia, i-Italy
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat
U-Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat unokuphawula okungu-127 kwezinye izindawo.
Indlu yamatshe yendabuko ezungezwe izimfunda, eduze nenkaba ye-Monte Prat. Amakamelo okulala amabili, ikhishi elihlonyelwe kanye nendawo yokudlela ehlukene ene-sporler yendabuko. Kubantu abangu-4. Izilwane azivunyelwe endlini.
Izici ezikhangayo kakhulu ze-Casa Cuian, ezivamile ezindlini zase-Monte Prat, izindonga zayo zamatshe kanye nephansi lamatshe, nesitofu sezinkuni esivamile, esaziwa ngokuthi i-spolert. Indlu ithatha igama layo emndenini wabanikazi abahlala lapha iminyaka eminingi futhi bahlobisa indlu ngesitayela sendabuko seFriuli. Esitezi esiphansi uzothola itafula lokudlela kanye ne-spolert, lapho wonke umuntu ehlangene khona ukuze afudumale kusihlwa sasebusika. Ikhishi nalo liphansi, futhi lifakwe umshini wokuwasha izitsha, imicrowave, isiqandisi nelinye itafula lesidlo sasekuseni. Izitebhisi zikuyisa emakamelweni okulala, okuhlanganisa negumbi eliphindwe kabili elivuleka ngqo kuvulandi, kanye nokufinyelela endlini yokugezela eneshawa. Kukhona indawo yokosa inyama eyakhiwe ngetshe eduze kwendlu izivakashi ezingayisebenzisa. Izimfunda namagquma azungeze indlu alungele ukuhamba ngezinyawo noma izingane ukudlala ngokukhululeka emoyeni omusha. Indlu eyabantu abangu-4 futhi ifinyelelwa ngomgwaqo owubhuqu omfishane.
I-Forchia di Sopra iqhele ngamamitha angu-700 ukusuka enkabeni ye-Monte Prat, futhi isuka endaweni yokudlela enesitolo esincane. Indlu izungezwe izimfunda, izinkuni nezinye izindlu zesintu.
Ibungazwe ngu-Albergo Diffuso Forgaria Monte Prat
Lapho ufika, sizokunikeza inombolo yocingo ongayishayela uma unesicelo noma ulwazi ngesikhathi uhlala.
Inombolo yepholisi: nr. 4387 del 30/05/2003